La-taliyayaasha Goldcrest Post iyo CinePointe ee Marti-gelinta Aqoon-is-weydaarsi ku saabsan Bixinta Filimka | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Wararka Injineerinka Warbaahinta
Bogga ugu weyn » News » Goldcrest Post iyo La-taliyayaasha CinePointe inay marti-geliyaan aqoon-isweydaarsi ku saabsan Bixinta Filimka
Goldcrest Post iyo La-taliyayaasha CinePointe inay marti-geliyaan aqoon-isweydaarsi ku saabsan Bixinta Filimka
Munaasabad laba-habeen ah oo loogu talagalay filimaanta iyo soosaarayaasha dokumentiga ah ee loo qorsheeyay Oktoobar 22 iyo 29.
NEW YORK CITY— Goldcrest Post iyo CinePointe Advisors ayaa soo bandhigi doona habka diyaarinta filimada loogu talagalay qaybinta aqoon isweydaarsi gaar ah oo 2-habeen ah oo cinwaankiisu yahay Soo Bandhigidda Filimka Filimka: Waxa loo baahan yahay in Bare kasta oo Fidiya ogaado. Waxaa loo qorsheeyay Oktoobar 22 iyo 29 at Goldcrest Post ee New York, aqoon isweydaarsiga waxaa loogu talagalay in lagu muujiyo filim iyo soosaarayaal dokumentiyo iyo kuwa kale ee mas'uulka ka ah miisaaniyad iyo kormeer filimaan ah marka ay marayaan soosaaridda boostada.
Fadhiyada ayaa bixin doona fahamka dhinacyada sharciga, farsamada iyo muuqaalka jirka ee bixinta filimka, iyagoo ka hadlaya mowduucyo aad u ballaaran sida loo gorgortamayo shuruudaha gudbinta ee faahfaahinta gudbinta OTT. Hoggaamiyeyaasha aqoon-isweydaarsiga waxaa ka mid noqon doona La-taliyayaasha Ganacsiga iyo La-Taliyaha CinePointe Stacey Smith, Madaxa Filimada Goldcrest Gretchen McGowan iyo Agaasimaha Maamulka Goldcrest Post Domenic Rom.
Fadhiyada aqoon isweydaarsiga waxaa ka mid ah:
Talaado, Oktoobar 22 (6:30 pm - 8:30 pm): Dulmarka Guud iyo Gaarsiinta Sharciga / Dukumintiga
Waa maxay macnaha dhabta ah ee macnaheedu yahay "keenida" filim? Gaarsiintu waa muhiim, tillaabada ugu dambeysa ee loo baahan yahay si loogu diyaariyo filim qaybinta iyo lacag la bixiyo. Hadana wali waa wax laga badalo miisaaniyada wax soo saarka iyo qulqulka shaqada. Stacey Smith oo ah La-taliyayaasha CinePointe ayaa dib u eegi doonta ereybixinta ereyga, waxay jebin doontaa jadwalka gaarsiinta dhabta ah, waxay sharxi doontaa sida looga wada xaajoodo shuruudaha gudbinta si loo qaybiyo kuwa si loo badbaadiyo waqtiga iyo lacagta, iyo waxay ku siisaa hagida ka fogaanshaha khaladaadka caamka ah ee bixinta sharciga iyo dukumiintiga.
Talaado, Oktoobar 29 (6:30 pm - 8:30 pm): Gaarsiinta Jirka iyo Farsamada
Doorka soo-saareyaashu waxay sii noqonayaan mid cakiran sababta oo ah soo-dhowaanshaha joogtada ah ee soo-if-baxa kamaradaha cusub iyo faahfaahinta gudbinta OTT ee adag. Waqti la qaado xirfadlayaal ka socda Goldcrest Post oo dib u soo jiidi doona daahkii "sixirka" dhawaaqa iyo sawir soo-saarista. Waxay ku burburin doonaan hannaanka iyagoo adeegsanaya banaanbaxyo gacan-ka-bixin ah waxayna bixin doonaan talooyin ku saabsan sidii aad ugu fulin lahayd mashruucaaga waqtigii loogu talagalay iyo miisaaniyadda.
Tigidhada dhacdada 2-habeen waa $ 175.00. Fadhigu wuu xadidan yahay. (Soo-saareyaasha waxaa si xoog leh lagula talinayaa inay ka soo qayb galaan labada kal-fadhi, laakiin tiro kooban oo kuraas ah ayaa la heli karaa habeen kasta $ 99 midkiiba.) Haweenka New York ee ku jira Filimka & Telefishanka xubnahoodu waxay helayaan qiimo dhimis 10% ah.
Stacey Smith, La-taliyayaasha CinePointe
Maaddaama ay tahay soo-saare khibrad leh isla markaana ah madaxa fulinta wax soo saarka shirkadda, Stacey Smith waxay u leedahay aragti gaar ah shaqadeeda la-tashiga arrimaha ganacsiga. Stacey waxay xiriirkeedii muddada fog la qaadatay hay'ad caalami ah oo caan ku ah isla markaana si adag u madax-bannaan filim Jim Jarmusch ee 1997, iyo sanadihii 16 ee soo socda waxay kormeertay maalgelinta, wax soo saarka, gaarsiinta iyo qeybinta filimada oo ay ku jiraan COFFEE iyo CIGARETTES, XEERARKA KHATARTA iyo BROKEN FLOWERS (guuleysteyaasha Cannes Filimka Grand Prix du Jury). La-taliyayaasha CinePointe, waxay kala shaqeysaa soo-saareyaasha sidii ay u gaarsiin lahaayeen adeegyo si habsami leh, waqti ku habboon, iyo qiimo-jaban leh, iyo sidoo kale inay ka caawiso soosaarayaasha iyo maal-gashadeyaasha inay maareeyaan oo ay kor u qaadaan dakhliga ka soo baxa mashaariicda inta lagu jiro wareejinta qaybinta.
Gretchen McGowan wuxuu hogaamiyaa soo saarista filimaanta iyo dokumentiyada filimaanta ee Goldcrest Films. Mashaariicda ugu dambeeyay waxaa ka mid ah Todd Haynes 'CAROL (Cate Blanchett, Rooney Mara), Bill Monahan iyo Atlas Entertainment's MOJAVE (Oscar Isaac, Garrett Hedlund), Shaaha Shaaha ee SLUMBER (Maggie Q), Filve Braveart' CARRIE PILBY (Nathan Lane, Bel Powley, Gabriel Byrne) iyo filimka dagaalka ee soo socda ee Australiya, DANGER CLOSE: DHAMMAAN LATAN TAN.
Ka hor inta uusan ku biirin Goldcrest, McGowan wuxuu soo saaray wax kabadan filimada 25 isagoo ah soo saare madax banaan iyo Mark Cuban's HDNet Films, Open City Films iyo Blow Up Sawirro. 2014, waxay heshay laba magac oo abaalmarin Emmy Award ah oo ku saabsan shaqadeeda ku saabsan dokumentiga HBO, HALKEE AYUU KA MID YAHAY HALKAN? NOLOSHADA IYO XAALADA TIM EE.
Isku dheelitir dheer oo bulshada New York soosaarka wax soo saarka ka dib, Domenic Rom wuxuu ku biiray Goldcrest Post ee 2019. Isaga oo ah maareeyaha maareeya, wuxuu mas'uul ka yahay guud ahaan hawlgallada, aragtida istiraatiijiyadeed iyo qorshaynta kobaca.
Rom wuxuu horey u soo qabtay jagada madaxweynaha iyo maamulaha guud ee Adeegyada Wax soosaarka ee Deluxe TV Post, ka dib muddadi uu ahaa maareeyaha Deluxe, New York. Wuxuu ka soo shaqeeyay jagada madaxweyne ku xigeenka sare ee Technicolor Creative Services muddo seddex sano ah, wuxuuna ahaa hoggaamiye ka tirsan PostWorks muddo 11 sano ah. Rom wuxuu shaqadiisa ka bilaabay midabaynta midabaynta Unitel Video. Markii dambe wuxuu ku biiray Duart Filimka Duart, halkaas oo uu ugu dambeyntii noqday kuxigeenka fulinta ee sheybaarada dijitaalka iyo filimada.
Ku saabsan La-taliyayaasha CinePointe
La-taliyayaasha CinePointe waxaa lagu aasaasay aaminsanaanta farshaxanka filimada waa in lagu taageeraa istiraatiijiyad ganacsi oo wanaagsan si loogu guuleysto suuqa maanta tartamaya ee weligiis is beddelaya. Kooxdayadu waxay la shaqeysaa maal-galiyayaasha iyo soosaarayaasha si ay u bixiyaan hagida ganacsiga, aaladaha iyo taageerada loo baahan yahay si himilooyinka hal abuurka ah ay u noqdaan badeecado la soo bandhigi karo.
CinePointe waxay bixisaa adeegyo dhamaadka-ilaa-dhamaadka ah kaas oo ku taageeraya mashruuc marxalad nololeedkiisa oo dhammaystiran, iyadoo bixineysa qaab dhismeedka ganacsi oo la taaban karo iyadoo la kobcinayo geedi socodka hal abuurka. Haddii aan la shaqeyneyno soo-saare, hay'ad wax soo saar, maalgeliyayaal ama maaliyad madadaalo, CinePointe waxay bixisaa adeegyo ku habboon oo u dhigma baahiyaha macmiil kasta iyo shuruudaha miisaaniyadda.
Goldcrest Post waa goob madaxbannaan oo madax bannaan oo wax soo saarka, oo bixiya xalal hal-abuur ah oo loogu talagalay filimada filimka, telefishinada, barnaamijyada iyo mashaariicda kale. Shirkadda ayaa siisa fursad ay xafiisyo tifaftiran, xafiisyo ku rakibaan, sawir dhammaystiran, tifaftiran maqal, ADR iyo isku darka, iyo adeegyada la xiriira. Dhibcaha dhow waxa ku jira Ruush Doll, Cunnadiisa, Waan ka xunahay inaad ku dhibto, Bilyano, Furriin, Shaki la'aan, Waxbarashada Dugsiga ee Maktabadda; Juliet, waa qaawan yahay, Ilaaha aabe Harlem, The Laundromat iyo Dads.
Broadcast-SocialMeida Caaqilada Cobalt bixinno Qaybinta tafatirka Graham Chapman Prmoted toEditor dhacdooyinka warshadaha Ott wax soo saarka post SJGolden - Waran & Fallaaro Colonie The Colonie - News COLONIE / Chicago TV Technology Ultra HD Forum 2019-10-09
Previous: Madaxa Injineerka / Adeegyada Adeegyada Farsamada-OKC 191007-UNCB-118
Next: BTS World Tour Show Showyo Nuxurka Nuxurka AR Content